Liverpool oo Khatar ugu jirta inay ka tagaan Maxamed Saalax iyo Xiddigo kale oo Muhiim ah….!! – Gool FM
Liverpool oo Khatar ugu jirta inay ka tagaan Maxamed Saalax iyo Xiddigo kale oo Muhiim ah….!!
(England) 07 Jan 2019. Liverpool ayaa afar dhibcood ku hogaamineysa horyaalka Premier League kaddib guul daradii ka soo gaartay kooxda Manchester City.
Inkastoo ay Reds heyso hogaanka horyaalka misane waxay khatar ugu jirtaa inay wayso Maxamed Saalax iyo xiddigo kale oo muhiim ah haddii ay Manchester City ka qaado koobka sida ay sheegeyso Taariikhda.
Cabaqabado waa wayn ayaa horey uga soo dhashay markasta ay Liverpool ku hungowdo inay horyaalka qaado oo waxaa ka tagi jiray xiddigo muhiim u ah.
2009-kii Man United ayaa ka qaaday Premier League, waxaa ka tagay Fernando Torres 18-bilood kaddib balse waxaa ka horreeyay inay soo ifbaxeen qiyaas fikradeedka ah inuu tagayo ka hor inta uusan ku biirin Chelsea.
Javier Mascherano ayaa ahaa laacib kale oo wayn oo ka tagay Liverpool isagoo ka faa’iideystay fursada ay u soo bandhigtay Barcelona.
Waxaa ka sii darnaa 2014 markii ay horyaalka ku hungoobeen oo waxaa u aqoonsaday koobka bar barihii 3-3 ay la galeen Crystal Palace, oo waxaa Premier League ka qaaday Manchester City.
Waxaa ka tagay isla sanadkaan Luis Sarez oo kaga biiray Barcelona, 2015-na waxaa ka tagay Raheem Sterling oo ka aaday kooxdii horyaalka qaaday ee Manchester City.
Haddaba waxaa la odorosayaa in Maxamed Saalax iyo xiddigo kale oo muhiim ah ay ka tagi karaan Reds haddii ay sanadkaan ku guuleysan waayaan Premier League.
Ogoow Waqtiga ay Caawa ciyaareyso Liverpool iyo SHAXDA ay u badan tahay inay ku soo gasho
RASMI: Real Madrid oo warbaahinta u soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Brahim Díaz